I-BAMBOO COUNTERTOPS (ISIKHOKELO SOYILO LWEKHITSHI) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-Bamboo Countertops (Isikhokelo soYilo lweKhitshi)
I-Bamboo Countertops (Isikhokelo soYilo lweKhitshi)
Nasi isikhokelo sethu kumanqwanqwa e-bamboo kubandakanya iintlobo ezithandwayo, umbala, iipateni, iindleko kunye neenzuzo kunye neengozi.
Ngabathengi abaninzi kunanini na ngaphambili bexhalabile malunga nokuhlaziywa kunye nezinto zokwakha ezi-eco, ii-countertops ze-bamboo zikhula ngokuthandwa. Ukuba iprojekthi yakho ifuna imiphezulu yeetafile, sele uyazi ezona zinto zixhaphakileyo-igranite, imarble, kunye ne-laminate, kodwa usenokuzibuza ukuba yintoni enye ekhoyo phaya.
Imiphezulu yeetafile yoqalo iyahluka kwaye iyahambelana neendlela ezahlukeneyo zoyilo, kodwa ngaba zezona zikhethiweyo kwiprojekthi yakho? Eli nqaku libandakanya yonke into oyifunayo ukwenza isigqibo, kubandakanya imvelaphi kunye nenkqubo yokuvelisa, ukhetho lokuyila, kunye nezinto ezilungileyo nezingalunganga zokufaka imiphezulu yeetafile ekhayeni lakho.
Zenziwe njani ii-Bamboo Countertops?
Iindidi zee-Bamboo Countertops
I-Bamboo Butcher Block Countertop
Iipropati ze-Bamboo Countertops
Unonophelo lwe-Bamboo Countertop
Ixabiso le-Bamboo Kitchen Countertops Iindleko
Ngaba i-Bamboo yinto efanelekileyo kwiComputer?
I-Bamboo Countertops Pros & Cons
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, i-bamboo ayingomthi ngokwenene, kuba ayiveli emthini. Uqalo yingca ekhula ngokukhawuleza ethi ivele kwilizwekazi lonke ngaphandle kweAntarctica naseYurophu. Kukho iindidi ngeendidi zoqalo - ezinye zikulungele ngakumbi ukwakha ifanitshala, ezinye zisetyenziswa njengomhombiso, kwaye uqalo lwe ‘moso’ lolona khetho luthandwayo kakhulu ekudaleni imiphezulu yeetafile.
Ingca ingavunwa kwiminyaka nje emine ukuya esixhenxe ukususela kwixesha lokuqala lokutyala. Njengengca engceni yakho engaphambili, ukusika umphezulu akuyi kuchaphazela iingcambu, ke obu butyebi buhlaziyekayo buhlala bukhupha amahlumela oqalo emva kwesivuno ngasinye.
I-bamboo iqulathe isiqu esingqingqwa, esinemingxuma, yahlulwe yangamacandelo onke iinyawo okanye njalo. Xa ikhula ngokwaneleyo, iplanga liyavunwa kwaye isiqu sisikwe ngobude sibe yimicu. Njengeplywood, ezi ziqwengana zigqitywe kwi-resin, zicinezelwe kunye, kwaye ziphathwe ngcinezelo ukuvelisa izinto ezomeleleyo nezomeleleyo zokwakha. Umtya ngamnye unemiphetho emibini ebhityileyo kunye nemiphetho emibini ebanzi.
Ukuba itafile yakho yoqalo iza kusetyenziswa ukulungiselela ukutya, kubalulekile ukuba naziphi na iikhemikhali ezisetyenziswa kwimveliso, ezinjengee-resins, i-adhesives, kunye ne-sealants, zikhuselekile ekutyeni kwaye akukho-formaldehyde. Umnikezeli wakho kufuneka afumane idatha yokuvelisa ngokulula. Ukuba abenzi njalo, khetha omnye umthengisi.
Umbala : Uqalo ngokwendalo lunombala okhanyayo, oshushu, negolide. Imiphezulu yeetafile yoqalo yendalo izisa ukukhanya okutsha ekhitshini okanye kwigumbi lokuhlambela lakho. Ukuba ukufezekisa uyilo lwakho lobuhle kubiza into enombala ngakumbi okanye emnyama, unokukhetha ezimbini.
Phambi kokuba ikhawuntari yenziwe, imicu yomntu ngamnye inokufakwa 'icarbonized' ukufezekisa umbala omdaka ngombala, we-mahogany. Imicu ibekwe ngaphakathi kwiionti zekhabhoni, emva koko inyangwe ngobushushu, uxinzelelo, kunye nomphunga kwizilinganiso ezingafaniyo ukufikelela kwisiphumo esifunekayo.
Emva kokuba ikhawuntari iye yakhiwa / yafakwa, kusenokwenzeka ukutshintsha umbala, kodwa kungcono kungcono ubonane nengcali. Isinyathelo sokuqala kukumisa i-countertop ukuya kwi-bamboo eluhlaza. Emva koko, kusetyenziswa into yokulungisa iinkuni okanye itywina, elandelwa libala, kunye nelinye itywina.
Iminyaka esi-7 yesipho somtshato
Zonke izinto kufuneka zikhuseleke ekutyeni. Kungenzeka ukuba umninikhaya agqibe le nkqubo ngokwabo, kodwa akucebisi. Ngaphandle kokuba uphathwe ngokufanelekileyo, i-bamboo iya kubamba ngokungafaniyo ibala, ikushiye ne-countertop blotchy.
Umzekelo: Ukuqhelaniswa kwemigca kumisela ipateni okanye 'ingqolowa' yezixhobo. Ingqolowa ye-bamboo yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha i-countertop. Ayisiyiyo kuphela iinkozo ezahlukeneyo ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubonakalayo, kodwa indlela yokwakha ibeka indlela izinto ezomelele ngayo.
Imiphezulu yeetafile 'eneenkozo ezime nkqo' iya kuba nembonakalo yemigca ethe nkqo ethe nkqo. Iziqwengana zoqalo zilungelelaniswe ngokuthe nkqo, ngomnye wemiphetho emincinci ejonge kumsebenzisi, emva koko yancamathela endaweni. Ulwakhiwo, le yeyona nto inganyangekiyo kwaye yomelele kuzo zonke iintlobo zeenkozo, kwaye igcina imbonakalo ebonakalayo yoqalo - ungazibona ngokucacileyo iindawo, okanye 'amaqhina'.
Indawo yokusithela ‘yeenkozo ezicabaleleyo’ okanye ‘yomphetho weenkozo’ ineenkangeleko ezibanzi, ezinemigca ethe tyaba, kwaye ngenxa yesi sizathu, ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba ‘yingqolowa ethe tyaba’. Njengama-countertops amileyo, i-feature of this orientation yi-bamboo node. Iinkozo ezisisicaba azihlali ixesha elide kunengqolowa ethe nkqo, kwaye zisengozini yokonakaliswa.
‘Iinkozo ezixineneyo’ zikhangeleka njengezinkuni. Endaweni yokusika i-bamboo ibe yimicu, imicu nganye iyalukwa ngokudibeneyo, itywinwe ngcina, kwaye inyangwa ngoxinzelelo.
'Ukuphelisa ingqolowa' lolunye uhlobo lwendlela eyaziwayo. ‘Ukuphelisa ukutya okuziinkozo’ imiphezulu yeetafile iyafana neenkozo ezime nkqo ngokobunzima nokuqina kodwa inembonakalo eyodwa. I-bamboo iyasikwa ibe yimicu eneesentimitha ezimbalwa ubude, ethi icinezelwe kunye ukwenza iibhloko ezincinci. Endaweni yemicu emide yoqalo enee-node ezibonakalayo, i-countertop ye-grain-end (ekwabizwa ngokuba yi-par-grain parquet okanye i-end-grain butcher block) yenziwe ngezo bhloko zincinci, zihlala zikwindlela yokutshintsha (ethe tye / ethe nkqo). Inomtsalane kakhulu, kwaye ifihla imikrwelo okanye isike amanqaku kakuhle, iyenze indawo yokusika ebalaseleyo.
Ulwenziwo Ukuqhubela phambili ukwenza ngokwezifiso ukubukeka kwe-countertop, kukho izinto ezininzi ezongezelelweyo zokuqwalasela. Ngaba ukhetha umjikelo ojikeleziweyo okanye umda ophindwe kabini? Zombini ziyafumaneka kwaye zinomtsalane ukhetho. I-inlay okanye i-inset ipatheni yenye indlela yokwenza ulwenziwo kwaye inokuphakamisa i-countertop yakho isuka kwindawo efana nomsebenzi ize ibonise ubugcisa bobugcisa.
I-bamboo ihlala isetyenziselwa okwangoku kwaye iikhabhathi zekhitshi zangoku kunye neetafile. Kuba uqalo lunokomelela ukuba alunamandla kunomthi onzima benza umbandela omkhulu wokusetyenziswa neekhabhathi. banokumelana nokuqhekeka kunye nokuqhekeka kubenza babe lukhetho olukhulu kwikhabhinethi ngokunjalo.
Imiphezulu yeetafile yebhloko yoqalo inezintlobo ezintathu zokwakha eziziinkozo ebusweni, iinkozo eziphelileyo kunye nokuphela kweenkozo. Uhlobo oluxhaphakileyo lwee-countertops ze-bamboo butcher zisebenzisa iphethini yokwakha 'yokuphela kweenkozo'.
I-bamboo ayitywinwanga kwaye endaweni yoko ifakwa ioyile ukukhuthaza umphezulu wendalo. I-oyile yamaminerali ihlala isetyenziselwa le nkqubo kwaye ioyile isetyenziswa ngokukhululekileyo ngokuchasene nengqolowa kwaye ishiywe ukucwina ubusuku bonke. Iingubo ezongezelelweyo zeoyile zinokusetyenziswa malunga neeyure ezingama-24 phakathi kwengubo nganye. Xa ugqityiwe umntu unokuzisula zonke ioyile ezigqithileyo usebenzisa ilaphu elicocekileyo kwaye ubhuqe umphezulu. I-oyile ye-Mineral kukutya okukhuselekileyo kunokukhusela kwaye kunokunceda ukukhusela izinto ekuqhekekeni okanye ekomeni.
Uyilo lwangoku lwekhitshi kunye nemiphezulu yeetafile.
I-bamboo, njengokhuni, ayinyangeki ngamanzi, kwaye ngenxa yesi sizathu, kuya kufuneka ucinge ngononophelo ngaphambi kokuyikhetha kwindawo ejikeleze isinki yakho. Akuchasene nobushushu, nokuba, ngoko ke iitrivethi, iipleyiti ezishushu, okanye ezinye izithintelo zokudlulisa ubushushu ziyimfuneko ukuyigcina ingabi mnyama kwaye itshiswe. Ngokuqhelekileyo ivela kwiipropati ze-antibacterial kunye ne-antimicrobial (esinye sezizathu zithandwa kakhulu njengendawo yokusika.)
aaron rodgers kunye nomtshato wedanica patrick
Uqalo lunokuhlala ixesha elide ukuba lukhathalelwe ngokufanelekileyo, kodwa unyango olunobulali luyimfuneko ukugcina ukujonga kunye nobomi botyalo-mali lwakho. Ukusika, ukubola, kunye neetshipsi kuya kwenzeka ngokusetyenziswa gwenxa. Ukunqunqa ukutya okuqaqambileyo kwitafile yoqalo kuya kushiya ngasemva ibala elinenkani.
Ulondolozo kuthintelo: Sula nakuphi na ukuchitheka msinyane nje ukuba kwenzeke ngelaphu elifumileyo ukuthintela ukuba ulwelo lungangeni kwi-countertop. Unokucinga ngokusebenzisa ioyile ye-tung ukukhusela izinto ekufuma, kodwa kuphela ukuba awuthumeli ukutya kubantu abane-allergies ye-nut kuba i-oyile ye-tung iqulethe imizila yamandongomane.
Ungaze ubeke ipani okanye imbiza eshushu phezu komphezulu wetafile ngaphandle kwesithintelo. Iivenkile okanye iipleyiti ezikhuselekileyo ziya kukhusela utyalo-mali lwakho kwiimpawu zokutshisa kunye neendawo ezitshileyo ezimnyama.
Khetha yonke into, ukucoca okungagungqiyo. Ungaze usebenzise i-ammonia okanye enye imichiza erhabaxa ukucoca itafile yakho yoqalo.
Ukulungiswa: Enye yezona zinto zinomtsalane malunga nemiphezulu yeetafile yerey bamboo kukuba zinokufakwa njani ngokulula kwisanti kwaye zicokiswe. Awudingi nokuqesha ingcali ukuba ikwenzele oku! Nangona ukhathalele i-countertop yakho ngokwemiyalelo engentla, ukugqoka kunye nokukrazula okuqhelekileyo akunakuphepheka.
Xa ufumene ibala eliphambili okanye uqokelele iidenti kunye neetshipsi kunokuba ukhululekile, lixesha lokucokisa. Isinyathelo sokuqala kukucoca i-countertop phantsi, ukususa amabala kunye nokukhupha nayiphi na imivalo. Emva koko, gcoba kwaye ulahle yonke isarhed. Ekugqibeleni, yenza kwakhona i-countertop usebenzisa i-sealant oyikhethile.
I-oyile yamaminerali okanye i-bex ngamatywina athandwayo. Zombini ziyafumaneka kwaye ziyaxabisa. Nokuba yeyiphi na into oyitywinayo oyikhethileyo, qiniseka ukuba ikaliwe ngokutya okukhuselekileyo.
Ukuhamba rhoqo kokulungiswa nokucokiswa kuya kuxhomekeka ikakhulu kwindlela oyisebenzisa ngayo i-countertop yakho. I-countertop ye-bamboo kwindawo yokuhlambela iindwendwe ayinakudinga ukucocwa iminyaka emininzi. Ukuba usebenzisa i-countertop yakho ukulungiselela ukutya kathathu ngosuku, ngakolunye uhlangothi, cwangcisa ukuyihlaziya kabini ngonyaka. Yiprojekthi eyonwabisayo engathathi ixesha elininzi okanye ifuna izixhobo ezizodwa.
Imiphezulu yeetafile yoqalo inokujongeka njengokutsha ngeeyure nje ezimbalwa zokunikwa ingqwalaselo, sesinye sezizathu zokuba zithandwa kangaka.
Njengazo naziphi na izinto zokwakha, iindleko ziyahluka ngokwengingqi kunye nomthengisi, kodwa ii-bamboo countertops zihlala zibiza phakathi kwe- $ 40 kunye ne- $ 100 ngonyawo wesikwere. Ukujonga ukuba ufumana ixabiso elifanelekileyo kumthengisi wakho, thelekisa nezinye izinto abazinikelayo. Imiphezulu yeetafile yoqalo kufuneka isondele kwixabiso lendalo Umthi wekhitshi ophakamileyo ukhetho okanye ukhetho lwamatye ngexabiso eliphantsi njengemabhile kunye negranite.
Impendulo emfutshane ithi 'ewe'. Zonke izinto zokubala zinezinto ezilungileyo nezingalunganga, yinto nje yokukhetha ukuba yeyiphi efanelekileyo kwiprojekthi yakho, kwaye yintoni ebaluleke kakhulu kuwe. Ukuba uyayithanda imbonakalo yoqalo kunye nomgangatho wokuhlaziywa kakhulu kuluhlu lwezinto eziphambili ngokubaluleka, imiphezulu yeetafile yoqalo lukhetho oluhle kakhulu. Ukuba awukaqiniseki, cinga ngezi zinto zilungileyo nezingeloncedo zokufakela imiphezulu yeetafile yoqalo.
I-anti-microbial / anti-bacteria
Yenziwe ngokwezifiso ngokubonakalayo
Iyahlala kwaye yomelele
Ukungabinayo i-chip / scuff ukumelana
Imiphezulu yeetafile yoqalo inokukhetha ngokufanelekileyo ukuba:
Awukhathali ngokwenza ulondolozo kunye nesihlabathi ngamanye amaxesha kunye nokuthengisa kwakhona.
Ukulungele ukubaphatha ngobunono.
Uwasebenzisela indawo yeetrafikhi esezantsi njengesiqithi sekhitshi okanye igumbi lokuhlambela.
Unokufuna ukunqanda ii-countertops ze-bamboo ukuba:
Unoburharha, uyalibala, okanye uthambekele kulondolozo lothintelo.
I-countertop isendaweni efakwe ngamanzi.
Isanding kunye nokuvelisa kwakhona izandi ezinje ngobunzima.
Uyilo olunxulumene ngakumbi jonga igalari yethu ye Iingcamango zomthi woqalo .
yimalini ibha evulekileyo
Ungalitshintsha njani igama lakho eMassachusetts
endaweni yezipho zamagama
iimpahla ezimhlophe zepant zemitshato
zithini izipho zesikhumbuzo